Mayelana NATHI - Anping Hanke Filter Technology Co., Ltd
I-Anping Hanke Filter Technology Co., Ltd isungulwa ngo-2005 e-Anping, eChina. Singabakhiqizi bokuhlunga okuncengiwe, isihlungi esenziwe sintered, isihlungi sediski, isihlungi seshubhu, isihlungi se-slot, isihlungi sebhasikidi njll imikhiqizo yokuhlunga ehlukahlukene nentambo ephothiwe yocingo
Sivume i-ISO9001 ngo-2013. Sethula imishini yokukhiqiza nokuhlola ethuthukisiwe, ubuchwepheshe bokukhiqiza obuvela phesheya, futhi sisebenzisa izinto zokuhlunga ezisezingeni eliphakeme njengezinto zokuhlunga eziyinhloko, ezikhethekile ekukhiqizeni izinsimbi zensimbi eziyinsimbi njengesihlungi esiyinhloko futhi isihlungi. Ngaphandle kwekhwalithi enhle, sinikezela ngosizo lobuchwepheshe, isixazululo esithembekile sokuhlunga kanye nensizakalo enelisekile. Sisiza ukukhiqizwa kwabasebenzisi kusebenze kahle.
With kuka 20years isipiliyoni kanye nentuthuko, thina ezikhethekile design, ucwaningo & ukuthuthukiswa kanye ukukhiqizwa lemifanekiso metal. Esihlungwini se-petro-chemical, i-polymer, ukuhlunga uphethiloli, ukwelashwa kwegesi, ukwelashwa kwamanzi, izimboni zokudla, njll, iHanke isibe uphawu oluhamba phambili. Manje sesinamakhasimende emhlabeni wonke, njenge-United States, iSouth Korea, iCanada, i-Australia, iFrance, iJalimane, iFinland, i-Italy, iBrazil, iJapane, iTaiwan, njll. Iningi lazo lidumile nomkhiqizo ohamba phambili embonini yawo.
Ngaphansi kokuqedwa okunesizotha kanye nemodeli entsha yezomnotho, sizama ukuthola indlela entsha yokuhlinzekwa kwamakhasimende bese sizama ukuba inkampani ehlunga okwehlukile. Ngemuva kwalokho siba nomkhiqizo wethu. Inhloso yethu ukwenza ukukhiqizwa kwabasebenzisi bethu kusheshe kakhulu futhi kuhlanzeke ngokusebenzisa izihlungi zethu. Ukwenza imvelo ehlanzekile nokwenza abantu babe nempilo eningi.
Siyakwamukela wonke amakhasimende amadala namasha ukuxhumana nathi futhi avakashele imboni yethu. Isihlungi seHanke singenziwa ngezifiso njengezidingo zakho. Silungele ukubambisana nawe ngezihlungi zekhwalithi ephezulu kanye nensizakalo elula esheshayo.
Ucwaningo oluphambili nethimba lezentuthuko;
Imiklamo yemiklamo ethuthukisiwe;
Isipiliyoni seminyaka engama-20;
Imishini yokukhiqiza esezingeni elifanele;
Ukuphathwa kwekhwalithi okusebenzayo;
Kwenziwe ngentando imikhiqizo kanye service;
Izixazululo ezithembekile zokuhlunga;
Izindleko ezengeziwe zokonga;
Isihlungi esimpintshiwe, isici sokuhlunga esenziwe sintered, idiski yokuhlunga nezinto zokuhlunga ezahlukahlukene nocingo lwensimbi Izinto zifaka insimbi engagqwali, i-duplex SS, iSidlo sangaphambilini se-Duplex SS, i-monel, i-inconel, i-nickel, i-hastelloy njll.
I-Petro-chemical, i-Polymer, i-Catalytic filtration, i-fuel filtration, ulayini wokukhiqiza ingcindezi kawoyela nokusika ukuhlunga uwoyela ne-homogenization; Ukwelashwa kwegesi; ukwelashwa kwamanzi; izimboni ezithaka imithi, izimboni zokudla